Isaya 23 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mutongo pamusoro peTire (1-18)
23 Mutongo pamusoro peTire:+ Ridzai mhere imi ngarava dzeTashishi!+ Nekuti chiteshi chengarava chaparadzwa; hachichapindiki. Vazviratidzwa vari kunyika yeKitimu.+ 2 Nyararai imi vagari vemunyika yepamhenderekedzo yegungwa. Vatengesi vanobva kuSidhoni+ avo vanoyambuka gungwa, vakupfumisai. 3 Zviyo* zveShihori* zvakaenda zviri pamusoro pemvura zhinji,+Pamwe chete negoho raNire, mari inowanikwa neTire,Zvikaunza mubereko kumarudzi.+ 4 Nyara, iwe Sidhoni, iwe nhare* yegungwa,Nekuti gungwa rati: “Handina kumbova nemarwadzo ekusununguka, uye handina kumbobereka,Kana kurera majaya kana mhandara.”*+ 5 Vanhu vacharwadziwa kwazvo pavachaudzwa nezveTire,+Sezvavakaita pavakaudzwa nezveIjipiti.+ 6 Yambukai muende kuTashishi! Ridzai mhere imi vagari vemunyika yepamhenderekedzo yegungwa! 7 Iri ndiro here guta renyu raipembera nemufaro kubvira kare kare, panguva yaro yepakutanga? Tsoka dzaro dzaimboriendesa kunyika dziri kure kunogara ikoko. 8 Ndiani asarudzira Tire izvi,Iro guta rekupa korona,Raiva nevanhu vanotengesa vaiva machinda,Raiva nevanhu vaiita bhizimisi rekuchinjanisa zvinhu vaikudzwa pasi pese?+ 9 Jehovha wemauto pachake ndiye asarudza izvi,Kuti ashayise basa kudada kwarinoita kunokonzerwa nerunako rwaro rwese,Kuti aninipise vaya vese vaikudzwa pasi pese.+ 10 Pararira uzadze nyika yako seRwizi rwaNire, iwe mwanasikana weTashishi. Hapasisina kana nzvimbo yengarava.*+ 11 Atambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa;Azunza umambo. Jehovha arayira kuti nhare dzeFenikiya dziparadzwe.+ 12 Uye anoti: “Hauchazopemberizve nemufaro,+Iwe akadzvinyirirwa, mhandara yeSidhoni. Simuka uyambuke uchienda kuKitimu.+ Kunyange ikoko hauzowani zororo.” 13 Tarisai nyika yevaKadheya.+ Ndivo vanhu vacho, kwete Asiriya,+Vakaiita nzvimbo yevaya vanogara mugwenga. Vakamisa shongwe dzekushandisa pakukomba kuti varwise;Vakasiya shongwe dzayo dzava pachena,+Vakaisiya yangova matongo. 14 Ridzai mhere imi ngarava dzeTashishi,Nekuti nhare yenyu yaparadzwa.+ 15 Zuva iroro Tire ichakanganwika kwemakore 70,+ kufanana nenguva inoraramwa namambo mumwe chete. Panopera makore 70, Tire ichafanana nepfambi inoimbwa murwiyo runoti: 16 “Tora rudimbwa, upoterere guta, iwe pfambi yakakanganwika. Ridza rudimbwa rwako neunyanzvi;Imba nziyo dzakawanda,Kuti varege kukukanganwa.” 17 Panopera makore 70, Jehovha achafunga nezveTire, uye ichatangazve kubhadharwa, yoita upfambi neumambo hwese huri panyika. 18 Asi mubereko wayo nemubhadharo wayo zvichava zvinhu zvitsvene kuna Jehovha. Hazvizochengetwi kana kuunganidzwa kuti zvizoshandiswa, nekuti mubhadharo wayo uchava wevaya vanogara pamberi paJehovha, kuti vadye vachiguta uye kuti vapfeke zvipfeko zvakanaka chaizvo.+
^ Kureva, “rwizi rwunobuda muRwizi rwaNire.”
^ Kana kuti “vakadzi vechidiki.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “chiteshi ngarava.”